ỊCHỌTA WINDOWS NDEKỌ AGBANWE - WINDOWS - 2019
Ịchọta Windows ndekọ agbanwe
Mgbe ụfọdụ ọ ga-adị mkpa iji soro mgbanwe ndị mmemme ma ọ bụ ntọala gbanwere na ndekọ Windows. Dịka ọmụmaatụ, maka nhichapụ mgbanwe ndị a ma ọ bụ ịchọpụta otú ụfọdụ ntọala (dịka ọmụmaatụ, ntọala ọdịdị, mmelite ọdịdị OS) edere na ndekọ ahụ.
Na nyocha a - mmemme free ewu ewu na-enye gị ohere ịhụ mgbanwe na ndekọ Windows 10, 8 ma ọ bụ Windows 7, na ụfọdụ ozi ndị ọzọ.
Regshot bụ otu n'ime usoro free ewu ewu maka nsụgharị mgbanwe na ndekọ Windows, dị na Russian.
Usoro nke iji ihe omume ahụ mejupụtara usoro ndị a.
Na-agbanye usoro mmemme (maka nsụgharị Russian, faịlụ ahụ a na-ebipụ bụ Regshot-x64-ANSI.exe ma ọ bụ Regshot-x86-ANSI.exe (maka mbipute Windows 32-bit).
Ọ bụrụ na ọ dị mkpa, gbanwee interface gaa n'asụsụ Russian n'akụkụ aka nri nke usoro ihe omume ahụ.
Pịa bọtịnụ "1st snapshot" wee pịa bọtịnụ "foto" (na usoro nke ịmepụta foto ntanetị nwere ike iyi na ihe omume ahụ na-eme oyi, nke a abụghị ihe ichere, usoro ahụ nwere ike iwe ọtụtụ minit na ụfọdụ kọmputa).
Mee mgbanwe na ndekọ ahụ (gbanwee ntọala, wụnye ihe omume ahụ, wdg). Dịka ọmụmaatụ, m gụnyere isi ihe na-acha ọkụ nke windo Windows 10.
Pịa "Snapshot abụọ" wee mepụta foto nke abụọ.
Pịa bọtịnụ "Tụnyere" (a ga-echekwa akụkọ a na ụzọ n'okporo ụzọ "Ụzọ iji zọpụta").
Mgbe a tụlere akụkọ a ga-emeghe na-akpaghị aka na ọ ga-enwe ike ịhụ nke gbanwere ntọala ndekọ.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ihichapu ọnyà ndekọ, pịa bọtịnụ "Kọwaa".
Rịba ama: Na akụkọ ahụ, ị ​​nwere ike ịhụ ọtụtụ ngbanwe ndebanye aha karịa gbanwere site na omume gị ma ọ bụ mmemme, ebe Windows n'onwe ya na-agbanwe agbanwe ntọala onye ọ bụla mgbe ọ na-arụ ọrụ (n'oge mmezi, ịlele nje, ịlele maka mmelite, wdg). ).
Regshot dị maka nbudata n'efu na //sourceforge.net/projects/regshot/
Ndekọ Live Watch
Usoro free na ndekọ Registry Live Watch na-arụ ọrụ dịtụ iche: ọ bụghị site n'iji ihe atụ abụọ nke ndekọ Windows, kama site nyochaa nlele na ozugbo. Otú ọ dị, usoro ihe omume ahụ adịghị egosipụta ngbanwe ndị ahụ, kama na-ekwu na mgbanwe dị otú ahụ emeela.
Mgbe ịmalitere ihe omume ahụ n'elu ubi, ezipụta nke igodo ndekọ ịchọrọ soro (yabụ na ọ pụghị ileba ndekọ ahụ anya n'otu oge).
Pịa "Malite Nyochaa" na ozi gbasara mgbanwe ndị a ga-eme ozugbo gosipụtara na listi ahụ dị na windo ihe omume ahụ.
Ọ bụrụ na ọ dị mkpa, ị nwere ike ịchekwaa mgbanwe mgbanwe (Save Log).
Ịnwere ike ibudata usoro ihe omume ahụ site na saịtị ọrụ nke onye mmepụta //leelusoft.altervista.org/registry-live-watch.html
Usoro ọzọ iji chọpụta ihe gbanwere na Windows 10, 8 ma ọ bụ Windows 7 ndekọ bụ WhatChanged. Ojiji ya yiri nke ahụ na mmemme mbụ nke nyocha a.
Na Nchọta ihe nyocha, lelee "Ndenye nyocha" (ihe omume ahụ nwekwara ike gbanwee mgbanwe faịlụ) ma lelee igodo ndekọ ndị a ga-enyocha.
Pịa bọtịnụ "Nzọụkwụ 1 - Get Baseline State".
Mgbe ị gbanwere na ndekọ ahụ, pịa na Nzọụkwụ 2 iji tụnyere ala mbụ na gbanwere.
A ga - echekwa akụkọ (WhatChanged_Snapshot2_Registry_HKCU.txt faịlụ) nwere ihe ọmụma gbasara ntọala ndekọ gbanwere agbanwe na nchekwa ihe omume ahụ.
Ihe omume a enweghị ụlọ ọrụ gọọmentị nke ya, ma ọ dị mfe ịnweta na Ịntanetị ma ọ chọghị ntinye na kọmpụta (dịka ọ dị, lelee usoro ahụ site na iji virustotal.com tupu ịmalite, ma buru n'uche na e nwere otu nchọpụta ụgha na faịlụ mbụ).
Ụzọ ọzọ iji tụnyere ụzọ abụọ nke ndekọ Windows na-enweghị mmemme
Na Windows, enwere ngwá ọrụ wuru iji tụnyere ọdịnaya nke faịlụ - fc.exe (Njikwa Njikọta), nke, n'etiti ihe ndị ọzọ, enwere ike iji mee ihe atụ abụọ dị iche iche nke ngalaba ndekọ.
Iji mee nke a, jiri Editor Registry maka mbupụ mpaghara ndekọ ndekọ dị mkpa (pịa aka nri na mpaghara - mbupụ) tupu mgbanwe ma mgbe mgbanwe ndị dị na faịlụ dị iche iche, dịka ọmụmaatụ, 1.reg na 2.reg.
Jirizie iwu dika iwu iwu:
cc c:  1.reg c:  2.reg> c:  log.txt
Ebee ka ụzọ na ụzọ ndekọ ndekọ abụọ ahụ si aga, mgbe ahụ, ụzọ na faịlụ ederede nke nsonaazụ tụnyere.
O bu ihe nwute, usoro a adighi adighi nma maka mgbanwe ndi ozo (n'ihi na akuko ahu adighi eme ihe obula), mana maka obere ntakiri igodo na mpaghara di iche iche ebe enwere mgbanwe ma kwesiri ichoputa eziokwu nke mgbanwe.